La-taliyihii gaarka ahaa ee amiirka Al-Shabaab oo la sheegay in duqeyn lagu dilay – XAMAR POST
By Zakariye iiman On May 12, 2020
Sidoo kale wararku waxay sheegayaan in la duqeeyay xubno Al-Shabaab ah oo ku sugnaa degmada Jilib ee gobalka Jubada Dhexe.
Duqeynta Jilib ayaa la sheegay in lagu dilay xubin sare oo ka tirsan Al-Shabaab, gaar ahaan Golaha fulinta ee Al-Shabaab. Wali magaciisa lama helin balse wararka qaar ayaa magaciisa ku soo koobaya Yuusuf.
Duqeynta ugu culus ayaa ka dhacday degaanka Haway ee gobalka Shabeellada Hoose waxaana lala beegsaday la taliyaha gaarka ah ee hogaamiyaha Al-Shabaab, kaas oo magaciisa lagu sheegay Mustaf Caato.
Saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in Mustaf Caato oo ah xubin muhiim ah oo ka tirsan la dilay waxaana sidoo kale duqeyntaas ku dhintay xubno isaga la socday oo u badan ilaaladiisa.
Ciidanka DF oo dad shacab ku rasaaseeyey Muqdisho iyo khasaare ka dhashay